Madaxweynaha “Waxbarashadu waa maalgashiga ugu muhiimsan ee shacabka iyo Aasaaska mustaqbalka.” | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Madaxweynaha “Waxbarashadu waa maalgashiga ugu muhiimsan ee shacabka iyo Aasaaska mustaqbalka.”
Madaxweynaha “Waxbarashadu waa maalgashiga ugu muhiimsan ee shacabka iyo Aasaaska mustaqbalka.”
Madaxweynaha oo ka hadlayey muhiimada waxbarashada ayaa hoosta ka xariiqay sida noloshu u tahay waxbarasho. Madaxweynaha ayaa yiri “Inta badan macalimiintu inay wax-bartaan lama aaminsana, laakin nolosha ayaa ah mid marwalba wax laga barto. Waxbarashadana ma laha waqti kooban. Markaan macalinka ahaa ayaan waxbarashada sii kororsaday oo aan fahmay in waxbarashadu ay kaalin mug leh ka qaadato nolosha waqti walba.”
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamud oo ka hadlay sida dalku ugu baahanyahay waxbarashada farsamada gacanta ayaa yiri “Jaamicadan Farsamada Gacanta ee Bolitekniko waxaa lagu bartaa barnaamijyo wax tar u leh bulshada, xirfadaha shaqo abuurka oo keeni kara in qoysaska laga masaruufo isla markaasna dhaqaalaha dalka wax u tara. Maanta waa waqtiga uu dalku ugu baahi badanyahay in dhalinteenu ay helaan waxbarasho farsamada gacanta ah oo u suurtogeliya dhalintu inay soo bandhigaan xirfadahooda iyo hab-curuntooda oo keeni kara shaqo abuur.
Madaxweynaha ayaa khudbadiisa uga hadlay isla markaasna xasuusiyey shacabka in dalka uu horumar ballaaran ku tallaabsaday 4 tii sano ee la soo dhaafay. Madaxweynaha ayaa yiri “Markaad maanta fiiriso magaalada Muqdisho iyo sida ay aheyd 4 sano ka hor oo Al-Shabaab ay magaalada inteeda badan heysteen, dowladana aysan hay’adahoodu si wanaagsan u shaqeyneynin oo aan heysanay garoonka diyaaradaha oo aad u koobnaa, Iskoolada iyo Jaamicadaha intooda badan ay xirnaayeen iyo maanta oo aad aragtaan horumarka baaxada leh waa mid nooga baahan inaan ku sii adkeysano sidii horumarkaas loo joogteyn lahaa. Markaan xilka la wareegay howlaha na horyaalay aad bey u badnaayeen, oo aan sameynay qorshe iyo istraatejiyad aan mudnaanta ku siinay in amniga la xoojiyo, iyo inaan dariiqa dimoqraadiyada u horseedno dalka.”
Madaxweynaha oo ka hadlayey qorsheyaashiisa mustaqbalka ayaa yiri “Waxaan si xoogan u aaminsahay in 4tii sano ee hore aan dhisnay aasaas xoogan ee dhanka siyaasada ah, oo rajo weyn na gelineysa in 4ta sano ee soo socota aan xooga saari doono dhalinyarada iyo sidii shaqo loogu abuuri lahaa. Tanoo macnaheedu yahay inaan u baahanahay waxbarasho tayo leh iyo shaqooyin, sida inaan waxbarashada tayeyno, qof walbana uu helo waxbarasho heerarkeedu kala duwan yahay si muwaadin walba uu wax u qori karo waxna u akhrin karo iyo inaan dhisno kaabayaasha dhaqaalaha sida waddooyinka, guryahay, Iskuulada iwm.”
Madaxweynaaha oo ka hadlayey waxbarashada mustaqbalka ayaa hoosta ka xariiqay muhiimada Iskuulada farsamada gacanta si loo helo dhalinyaro leh xirfado muhiim u ah koboca dhaqaalaha. Madaxweynaha ayaa yiri “Waa inaan maalgashanaa waxbarasho noo horseeda horumarka dhaqaalaha dalka. Tanoo ah in waxbarashada farsamada gacanta ay keeneyso in dhalintu ay shaqo abuurtaan, lana yimaadaan hab-curin keeni kara inay ganacsi furtaan. Waxbarashaduna waa inay taageertaa dib u dhiska dalka iyo koboca dhaqaalaha. Waana inay noo horseedaa in Soomaaliya ay la tartami karto caalamka oo dhalinteenu ay dhanka teknolojiyada ka horumaraan si looga maarmo dadka shisheeyaha ee dalka ka shaqeeya. Waxbarashadu waa inay taageertaa sidii beeraha loo tabci lahaa, kalluunka loo soo saari lahaa, gaadiidka iyo korontada loo hagaajin lahaa. “
Ugu danbeyntii, Madaxweynaha ayaa ballanqaaday in 4ta sano ee soo socota uu xooga saarayo sidii waxbarashada loo tayeyn lahaa iyadoo ah furaha horumarka dalka. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu xooga saari doono arrimahan:
3. In la maalgeliyo xarumo farsamada gacanta si loo kobciyo dhaqaalaha oo dhalinyarada ay u helaan shaqooyin cusub oo joogto ah. Dowladeyduna waxey xooga saari doontaa Iskuulada farsamada gacanta. Tanoo xirfad siin doonta dhalinteena.
Previous articleElections for the Lower House in South West State are expected to end next week
Next articleSomali President “Education is the best investment in our people and the foundation of our future.”